Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Teknolojia tamin’ny Novambra 2018
Teknolojia · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Novambra, 2018
Hita tanaty Fandikàna teny
Mpanoratra David Sasaki · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny fampandehanana ny adihevitra eratany ety anaty aterineto ny fandikana teny. Tsy zavatra moramora ny manolotra hevitra sy fandinihana amin'ny teny sy kolontsaina iray ho any an-kafa ary matetika mandany fotoana bebe kokoa noho ny fanoratana ilay lahatsoratra tany am-boalohany. Na izany aza, mirotsaka hanolotra...
Mpanoratra tan · Myanmar (Birmania)
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Fahombiazana lehibe ny Barcamp Yangon 2010 izay natao voalohany tao Myanmar (Birmania) nandritra ny roa andro, niaraka tamin’ny mpandray anjara maherin’ny 2.700 tamin’ity hetsika ity. Ireo nanatrika nandritra ny lanonana fanokafana Natao tao amin’ny Info-Tech tamin’ny faha 23 sy...
13 Novambra 2018
Mpanoratra Rebecca MacKinnon · Eoropa Andrefana
Mpanoratra Rebecca MacKinnon · Ady & Fifandirana
Belarosy, Rosia: Lavanty Fanaovana Asa Soa Anaty Aterineto Ivarotana Olona
Mpanoratra Teplitsa · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Tsy vaovao ny fanaovana ny lavanty ho fitaovana fanangonam-bola eo amin'ny tontolon'ny fanaovana asa soa -- varotana amin'ity fomba ity avokoa ny zava-drehetra miainga amin'ny sary hosodoko ka hatrany amin'ny fitsidihana miavaka. Misy mihitsy aza ireo mivarotra olona: lavantinà sakafo hariva miaraka amin'olomalaza sy sakafo maraina miaraka aminà mpandraharaha.
Hanaraka ny dian'ny Emira Arabo Mitambatra sy hanasivana ny tolotra VoIP ve i Syria?
Mpanoratra SMEX · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Handrahona mivantana ny zon'ny Syriana hanana fiainana manokana sy ny fahalalaham-pitenenana ny politikan'ny fandrarana tolotra VoIP.
Zeorzia-Rosia : Ady anaty Aterineto
Ankehitriny, ady no eto amin'ity fanaovana karajia ity, Rindrin'ny tsy fahaizana mifankahazo, fifanomezana tsiny, fiampiangàna, fifanompàna ary ilaozan'ny olona izy, toy ny mpitsoaponenana. Androany, iray tamin'ireo olona fantatro no nanoratra tamiko hoe nialàny ilay vondrona. Toy ny hoe tsy misy intsony ny fitiavana sy ny fanembonana ny omaly. Androany, lasa...
Kambodza-Thailandy: Adihevitra manodidina ny vohikala ilovethailand.org
Mpanoratra Chhunny Chhean · Kambodza
Vao haingana no niteraka resabe tamin'ny tambajotra ny fandefasana ny vohikala ilovethailand.org. (tsy mandeha intsony ny rohy). Nanambara ny Praiminisitra thailandey Abhisit Vejjajiva fa io vohikala io dia mikendry ny hamerina indray ny endriky ny firenena ary hampitambatra ny firenena ao anatin'ireo fikorontanana tato ho ato. Teraka avy amin'ireo fitakiana...